रूपान्तरित र एकल बजारमा - एक क्लिक संग भाग्य संग?
उनको र एक बजार मा उपस्थिति
म कसरी सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्छु?
ठीक छ, ठीक छ?
आजकल भन्दा बढीको संख्या अब भन्दा उच्च छ। एक पछाडि निराशाजनक पछाडि छ, अन्य शायद धेरै उच्च दावीहरू। धेरै पनि अनियमित एकल हुन् वा सँगै एक कठिन समय सँग भेट्न। इन्टरनेट मार्फत सम्पर्क गर्ने आधुनिक तरिकाले अधिक र अधिक एकलहरू प्रयास गर्दैछ। अनलाइन डेटिङ साइटहरू प्राय भन्दा बढी लोकप्रिय छ।
एक पटक र अहिले इशारा गर्नुहोस्
पूर्वको "दोस्रो शताब्दी" को खोज धेरै रमाइलो भयो र वास्तविक जीवनमा प्रायः कार्यस्थलमा वा साथीहरूको सर्कलमा सीमित भएको छ, इन्टरनेटको लागी, आज धेरै सम्भावनाहरू छन्। भित्री, तर बुद्धिमानी शर्मीला जवान मानिसले पहिले नै फेला पारेका छन् - अधिकतर - डुलसिनी।
ग्राहकहरु को लागि 55 + र सामान्यतया शिकारी या व्यस्त मान्छे को प्रबंधकों र स्वयं को नियोजित व्यक्ति को रूप मा रोक दिए को लागि, जो थोडा समय या बाहिर जाने को इच्छुक छ, नयाँ अवसरों को वादा गरे नयाँ डेट मार्केट संग खोलिएको छ। कुन स्पाइडाइम 60 वर्षीया आज कफी घरमा महिलालाई बोल्छ? इन्टरनेटको लागी, रिवर्स पनि सम्भव छ। एक लामो समयको लागि, एक महिलालाई अब सम्पर्क गर्न पर्खनु पर्दछ, तर यसलाई आफैले पहल गर्न अनुमति छ।
वास्तविक जीवनमा, एक नर्स, उदाहरणका लागि, भेट्टाउँछ र राम्रो तरिकाले शिक्षित, मायालु विक्रेताले समान सांस्कृतिक हितको साथ प्रेम गर्दछ, लगभग शून्यको रूपमा राम्रो छ। इन्टरनेटले यसलाई सम्भव बनाउँछ!
एन्टरनेट बिना प्रयोग हुने साझे साझेदारको खोजीमा कडा मेहनत, यो दुर्भाग्यवश आज पनि एक प्रोफाइलको साथ पागल जान र ईमानदार देख्ने एकल निराश गर्न सजिलो छ।
केही पुरुषहरूले प्राय: डेट अर्डर सूचीसँग डेटिङ साइटहरू भ्रष्ट गर्छन् र सोच्नका लागि उनीहरूलाई मात्र "अर्डर" राख्नु पर्छ। प्रोफाइल जसको सामग्री र आवश्यकता जानबूझकर एक रात खडा हुन्छ, यौन सम्बन्ध र अपमानता अधिक र अधिक हुन्छ। आजदेखि हरेकजनाको इन्टरनेट पहुँच छ भने, प्रोफाईल स्तर डूबिरहेको छ, केहि पीडित एकल महिलाहरु भन्छन्। समेत एकल-सेक्स एक्सचेंज, जुन सेवाको प्रयोगको लागि तिर्नुपर्ने छ, स्तर डूबिरहेको छ र फोटो बिना गुमनाम रूपमा रजिस्टर गर्ने संख्या, ठूलो मात्रामा बढेको छ।
एकाधिक रजिस्ट्रेसन र मजा प्रोफाइलहरू र साथै गम्भीर प्रोफाईलहरू जसको सामग्रीले यस्तो लेखिएको छ: "म केही कुरा खोज्दैछु। म बस चारैतिर हेर्छु "केवल अपमानजनक रूपमा हो। यसबाहेक, बिस्तारै स्तर र धेरै नकली बावजुद, सम्पर्कहरूको संख्या र धेरै फरक क्यारेक्टरहरू पत्ता लगाउन सम्भवतः उच्चतम। एक इमानदार लगाउने एक्लो प्रायजसो औंलाहरू यहाँ देखिन्छन्।
धैर्यता, तर यो थोडा समय डेटिङ साइटहरू लाग्न सक्छ!
नयाँ टिप्पणीहरू सामान्यतया पत्रहरू र पृष्ठ भ्रमणहरूमा अधिकृत छन्। जोडेले केवल हज़ार रेंजमा केवल स्थायी रूपमा सम्बन्धी केहि क्लिकहरू पाउन सक्दछ, यो सम्भवतः नियमको लागि प्रसिद्ध अपवाद हो।
36- 45 वर्षीय सिंगलहरू मात्र वास्तविक जीवनमा एक कठिन उमेर समूह होइनन्। सबै पछि, सम्भावित समकक्षहरू सामान्यतया पहिले नै एक विश्वसनीय परिवारमा एकीकृत हुन्छन् र प्रदान गरिएको वा दोस्रो चरणको लागि तयार छैन।
सबैभन्दा राम्रो साथी माया हुँदा के गर्ने?
गम्भीर खोजको लागि तपाई आफैंका विचार र इच्छाहरूको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तथापि, कसैले उनीहरूको पुरानो कथा पूरा गरेको छैन जो मानिसहरूले द्वारा सम्पर्क गर्न अपेक्षा गर्नुपर्छ। एकदम छिट्टै एक "मूर्खता" अनगिन्ती हुन्छ।
यसबाहेक, एक तयार हुनुपर्छ कि मानाएको एडोनिसको फोटोको साथ फोटोको साथ पहिलो मितिमा मात्र कम समानता छ।
यद्यपि, गुमनामताको बावजूद, कसैले सधैँ सम्मान र सम्मान संग अर्को व्यवहार गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा धोखाधडी विशेष गरी वजन र उमेरमा हुन्छ। यसबाहेक, पुरुषहरूले आफ्नो घटाउने बाल प्रवेश गर्न समस्याहरू छन्। बारीमा महिलाहरूले आफ्नो किलसँग धोका दिए। यो प्रायः वास्तविकता होइन कि वास्तविकता होइन, प्रायः पहिले नै 10 वर्षका तस्बिरहरू आदानप्रदान गरिन्छ।
पहिलो मितिमा निराशा अनिवार्य छ।
जीवन अनुरोध कन्सर्ट, वास्तविक न त इन्टरनेट न छैन। यस थाह छ र कुराकानी, विनिमय को भव्य कला फाइदा लिन्छ र शेयर बजार मा एकल र यसको संभावनाहरु को संख्या, एक सम्भव आनन्द र बाटो मा आत्म-अनुभव केही धेरै छ भने प्रत्येक थाहा रही भने।
सायद तपाई मात्र अधिक धैर्य हुनुपर्दछ।
रोजगारीको जीवनमा नग्नता नराम्रो?